IiNdumiso Nengoma Yazo Iingoma—Iingoma Ezithuthuzelayo Nezifundisayo | Isigidimi SeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI INtetho Yezandla YaseMadagascar ISepedi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yase-Estonia Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseGrisi Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseNicaragua Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Irish Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiAssamese IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCambodia IsiCebuano IsiChichewa IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChol IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEstonia IsiFaroese IsiFinnish IsiFrentshi IsiFulfulde (saseCameroon) IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKekchi IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKonkani (saseRoman) IsiKonkani (sesiDevanagari) IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Sorani IsiKwanyama IsiLaotia IsiLatvia IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMapudungun IsiMaya IsiMazahua IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMiskito IsiMixtec (saseHuajuapan) IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNavajo IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNias IsiNorway IsiOssetia IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPangasina IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSomali IsiSranantongo IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTarahumara (SaseMbindini) IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUdmurt IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isiLow German isiZapotec (saseIsthmus)
UDavide nabanye baqamba iingoma ezaziza kusetyenziswa ekunquleni. Kwincwadi yeeNdumiso kukho ezili-150
EYONA ncwadi inkulu eBhayibhileni iqulethe iingoma ezingcwele. Le ncwadi yabhalwa isithuba esimalunga neminyaka eli-1 000. Incwadi yeeNdumiso inawona mazwi achukumisayo okuvakalisa ukholo awakha abhalwa. Kuyo kuchazwa iimvakalelo ezahlukahlukeneyo zabantu, uvuyo, indumiso, umbulelo, intlungu, usizi nenguquko. Kuyacaca ukuba abadumisi babemthembile uThixo yaye benolwalamano olusondeleyo kunye naye. Makhe siqwalasele eminye imixholo yezi ngoma.
UYehova nguMongami olungileyo, okufanelekeleyo ukunqulwa nokudunyiswa. KwiNdumiso 83:18 sifunda oku: “Wena, ogama linguYehova, nguwe wedwa Oyena Uphakamileyo phezu komhlaba wonke.” Iindumiso ezininzi zidumisa uYehova ngemisebenzi yakhe yendalo, njengeenkwenkwezi ezisezulwini, izinto eziphila emhlabeni, nendlela emangalisayo umntu adalwe ngayo. (INdumiso 8; 19; 139; 148) Ezinye zizukisa uYehova njengoThixo osindisa aze akhusele abo banyanisekileyo kuye. (INdumiso 18; 97; 138) Ezinye zimbalaselisa njengoThixo wokusesikweni, othuthuzela abacinezelekileyo aze ohlwaye abangendawo.—INdumiso 11; 68; 146.
UYehova uyabanceda aze abathuthuzele abo bamthandayo. Mhlawumbi eyona ndumiso idumileyo yeyama-23, apho uDavide achaza uYehova njengoMalusi onothando, ozikhokelayo, azikhusele aze azinyamekele izimvu zakhe. INdumiso 65:2 ikhumbuza abanquli bakaThixo ukuba uYehova ‘ngumphulaphuli wemithandazo.’ Abantu abaninzi abenze isono esinzulu baye bathuthuzelwa yiNdumiso 39 neyama-51, apho uDavide athetha ngokunyanisekileyo ngendlela aguquke ngayo kwizono ezinzulu azenzileyo nalapho athetha khona ngokuxolelwa kwakhe nguYehova. INdumiso 55:22 isibongoza ukuba sithembele kuYehova size silahlele kuye wonke umthwalo esinawo.
NgoBukumkani bukaMesiya uYehova uya kuliguqula ihlabathi. Iindinyana ezininzi kwiiNdumiso zibhekisela kuMesiya, uKumkani ekwaprofetwa ngaye. KwiNdumiso 2 kuthiwa lo Mlawuli uya kuzitshabalalisa iintlanga ezingendawo, ezimchasayo. INdumiso 72 ithi lo Kumkani uya kuphelisa indlala, ukungabikho kokusesikweni nengcinezelo. Ngokutsho kweNdumiso 46:9, uThixo uya kuphelisa imfazwe nazo zonke izixhobo zokulwa esebenzisa uBukumkani bukaMesiya. KwiNdumiso 37 sifunda ukuba abangendawo abayi kuphinda babekho, ngoxa abo bangamalungisa beya kuphila ngonaphakade benandipha uxolo nemvisiswano emhlabeni wonke.
—Oku kusekelwe kwincwadi yeeNdumiso.
IiNdumiso zikuxhasa njani ukulunga kolawulo lukaYehova?
Ziziphi iindumiso ezibonisa indlela uThixo abanceda nabathuthuzela ngayo abo bamthandayo?
Ngokutsho kwencwadi yeeNdumiso, uYehova uya kuliguqula njani ihlabathi?
KwiNgoma kaSolomon, lo kumkani usibonisa ukuba, nokuba ubani angaba sesona sinhanha, oku akusosiqinisekiso sokuba uya kuthandwa lilo naliphi na ibhinqa alifunayo. Ubhala ngemigudu awayenzayo ezama ukuwisa intliziyo yembelukazi eselula eyayithandana nomfana ongumalusi. Le ngoma iphefumlelweyo ibonisa ukuba xa abantu bethandana, abamele benze izinto ezingenasidima. Esi sibini sabonisa ukuzeyisa, isidima nokunyaniseka.
Kuthekani xa usiva ngathi iingxaki zakho zincinci kunezo abanye abantu abanazo?